Xildhibaan Canab oo sheegtay in haweenka ay u socdaan 50% – Kalfadhi
Xildhibaan Canab oo sheegtay in haweenka ay u socdaan 50%
Xildhibaan Canab Xasan Cilmi oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay hadda ku leeyihiin Baarlamaanka 24 kursi, 6-da ka maqanna ay heli doonnaan.
Marwo Canab, ayaa haweenka ku jira baarlamaanka kula dar-daarantay in 24-ka hadda ku jirta baarlamaanka aysan gadaal u noqon, oo ay horay u socdaan.
“Annaga waxaan u soconaa boqolkiiba 50, haweenka waa laf-dhabarta dalka Soomaaliya. Shantii doorasho ee dalka uu galay saddex kamid ah Oday dhaqameed ayaa qorayay, hal doorasho oo keliya ayaa la tartamay oo ah tii ugu dambeysay, gabdho badan ayaa soo baxay, ilaa shan gabdhood oo ragga la tartamay ayaa hadda baarlamaanka fadhiya”, ayey hadalkeeda sii raacisay.
Shalay baarlamaanka ayaa ka doodayay qoondaha haweenka, oo kamid ahaa sharciyadii afarta ahaa ee guddigii wada-jirka ee baarlamaanka ay kasoo shaqeynayeen, afartaasi sharci ayaa mid mid looga doodi doonnaa.
Golaha Shacabka oo maanta ka dooday Qoondada Haweenka
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay in Kuraasta Haweenka ay ku fadhiyaan loo gaar yeello